कलाकारको ‘ड्रिम रोल’::Online News Portal from State No. 4
कलाकारको ‘ड्रिम रोल’
रिलमै सही, एउटै जीवनमा धेरै चरित्रमा जिउँछन् कलाकारहरु । यस्तो मौका आममान्छेले कहिल्यै पाउँदैनन् । सायद यही कारण हुनुपर्छ, जति भूमिकामा काम गरे पनि हरेक कलाकारको आफ्नो छुट्टै ‘ड्रिम रोल’ हुन्छ । कतिको त्यो सपना पूरा हुन्छ, कतिको हुँदैन । अहिले ‘लाइमलाइट’ मा रहेका हिरो/हिरोइनले आफ्नो ‘ड्रिम रोल’ यसरी सुनाए :
मलाई सुरुमा वेश्याको रोल गर्न मन थियो, डेब्यु फिल्म लज्जामै गर्न पाएँ । धेरैले तारिफ गर्नुभयो । एक्सनप्रधान भूमिका पनि गरिसकें । अबचाहिँ साइको वा पागल टाइपको चरित्रमा काम गर्ने इच्छा छ । आफूले बाँचिरहेको भन्दा फरक भूमिकाका लागि धेरै मेहनत त गर्नुपर्छ तर सन्तुष्टि पनि पाइँदोरहेछ । म एक समयमा एउटा मात्र फिल्म गर्ने भएकाले पनि यस्तो भूमिकाको होमवर्क र तयारीका लागि पर्याप्त समय दिन सक्छु ।
धेरैलाई थाहा नहोला, स्कुल पढ्दादेखि नै हाम्रो ब्यान्ड थियो । प्लस टुमा पनि त्यसले निरन्तरता पायो । अहिले पनि समय मिल्नासाथ ब्यान्डका साथीहरू जम्मा हुन्छांै र गीत प्राक्टिस गर्छौं । आनन्द लाग्छ । म्युजिकसँग विशेष लगाव छ मेरो । त्यसैले पर्दामा गायकका रूपमा देखिनु अहिलेको मेरो ‘ड्रिम रोल’ हो । सोलो सिंगर वा ब्यान्ड भोकलिस्ट जे भए पनि हुन्छ । त्यस्तो भूमिकालाई अझ जीवन्त बनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ ।
काल्पनिकभन्दा वास्तविक चरित्रमा काम गर्नु ‘च्यालेन्ज’ हुन्छ । मलाई कुनै प्रतिष्ठित मान्छेको बायोपिक फिल्ममा काम गर्ने रहर छ ताकि कसैको अमूल्य योगदानलाई फिल्मका रूपमा रेकर्ड राखेर भावी पुस्ताले हेर्न पाओस् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भूमिकामा फिल्ममा देखिनु मेरो ‘ड्रिम’ हो । यसबाहेक खेलाडी, राजनीतिक व्यक्तित्व वा अरू कुनै क्षेत्रमा सफल भएका व्यक्तिको बायोपिक भए पनि हुन्छ । लियोनार्दो डिकाप्रियोले ‘द एभिटर’, ‘ग्याटसवे’ जस्ता बायोपिक फिल्ममा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट प्रभावित छु म ।
म स्कुल हुँदा फुटबल खेल्थें, कराँते पनि सिकेको छु । खेलप्रति खुब लगाव छ मेरो । कलाकारिता सुरु गरेपछि पनि खेलप्रतिको प्रेम घटेको छैन । बरु खेलाडीकै भूमिकामा काम गर्ने उत्कट इच्छा छ । रियल लाइफमा पनि खेलाडी भएकाले रिलमा पनि फिट हुन्छु र त्यत्तिकै मेहनत पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । तर विडम्बना के छ भने समाजमा जस्तै, सिनेमामा पनि खेलकुदलाई असाध्यै कम महत्त्व दिइन्छ । एकाध फिल्मले खेलको विषय उठान गरे पनि झारो टार्ने शैलीमा बनाइएको हुन्छ । त्यसैले पर्दामा खेलाडीका रूपमा देखिने मेरो चाह पूरा होला त ? आशंकै छ ।
कलाकार भएपछि सबै खालको चरित्रको लोभी भइँदोरहेछ । हामीले देखिरहेको वा भोगिरहेको आम जिन्दगीसँगै अति नजिक रहेको भूमिका गर्ने मन थियो, जुन मैले लभ सासामा गरेकी छु । मैलेजस्तै दर्शकले सासालाई कतिको महसुस गर्नु हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । सासापछि ममा अर्कै भूमिकाको भोक लागेको छ, त्यो हो, समाजमा भएको नकारात्मक सोच र व्यवहारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र । नेगेटिभ चरित्रमा काम गर्दा अभिनयका धेरै थरीका रस प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसबाहेक ब्ल्याकमा रानी मुखर्जी, कहानीमा विद्या वालन अनि बर्फीमा प्रियंका चोपराले गरेका चरित्रहरू पनि मेरा ‘ड्रिम’ हुन् ।
यस्तै रोल ड्रिम हो भन्ने त छैन तर जस्तोसुकै भए पनि हुन्छ, सिर्फ मैले नगरेको र नयाँ हुनुपर्‍यो । भिन्न भूमिकामा काम गर्दा चुनौती हुन्छ, अनि दत्तचित्त भएर काम गरियो भने अडियन्सको माया पनि पाइन्छ । फेरि हरेक फिल्ममा फरक चरित्रमा टेस्ट गर्नु मेरो स्टाइल बनिसकेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनु छु । अहिलेकै लागि चाहिँ खतरा खालको नेगेटिभ क्यारेक्टरमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ । पछिल्लो समय रेभेनेन्टमा लियोनार्दो डिकाप्रियोको कामबाट औधी प्रभावित छु ।
खेल र खेलाडीप्रति मेरो ठूलो सम्मान छ । सिनेमामा पनि खेलाडीकै रूपमा काम गर्नु मेरो ‘ड्रिम’ हो । खेलाडीको जीवनमा आधारित रियल स्टोरी पनि हुन सक्छ वा काल्पनिक कथा नै । मीरा राई, बैकुण्ठ मानन्धरजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएकै दर्जनौं खेलाडी छन् तर उनीहरूका कथा पर्दामा कहिल्यै अटाउन्नन्, पान सिंह तमोर, भाग मिल्खा भाग वा दंगल हेरेरै चित्त बुझाउनुपर्छ हाम्ले । त्यसैले एक्टिङबाट रिटायर्ड हुनुभन्दा अगाडि रिलमा खेलाडीका रूपमा देखिने ठूलो सपना छ । यस्तो भूमिकामा अफर आएन भने आफैं फिल्म बनाउँछु ।
हरेक फिल्ममा फरक भूमिकामा देखिन खोज्नु आदत बनिसकेको छ मेरो । थरीथरी जनराका फिल्ममा विभिन्न निर्देशकसँग काम गर्दा चुनौती त हुन्छ नै, सँगै आत्मसन्तुष्टि पनि पाइरहेको छु । तैपनि नयाँ चरित्रको भोग मरेको छैन, सायद अभिनयमा प्यासन भएका सबै कलाकारलाई यस्तै हुन्छ । अब मलाई एक्सन भूमिकामा आफूलाई ढाल्न छ किनभने मैले एक्सन लेडीको अवतारमा देखिन पाएको छैन । फेरि एक्सन भन्नाले घिसिपिटी टाइपको हैन, अलि ‘हार्डकोर’ र ‘इन्टेन्स’ हुनुपर्छ । म एन्जेलिना जोलीको एक्सनबाट निकै प्रभावित छु ।